Zôrôastrisma - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Zoroastrisma)
Ny zôrôastrisma na zôrôastrianisma dia fivavahana naorin’ i Zaratostra (na Zôrôastra) tany Persia tamin’ ny taonjato faha-7 tal. J.K. ka i Ahora Mazda (Ahura Mazda) no anaran’ ny Andriamaniny. Manindry mafy ny fifanoheran’ ny herin’ ny tsara amin’ ny herin’ ny ratsy (doalisma) i Zaratostra nefa tsy mitory fisian’ andriamanitra roa mifanohitra.
Ireo resaka nifanaovany tamin’ Andriamanitra sy ny fahasarotan’ ny fitoriany ny zavatra reny dia voarakitra ao amin’ ireo hira masina atao hoe gatha izay hita ao amin’ ny fitambaran-tsoratra masina atao hoe Avesta. Fivavahana efa nisy talohan’ ny kristianisma sy ny silamo sady niara-nisy tamin’ ny jodaisma tamin’ ny fotoan’ ny fahababoan’ ny Jiosy ny zôrôastrisma.
1 Ny fiforonan' ny zôrôastrisma
1.1 I Zaratostra mpanorina ny zôrôastrisma
1.2 Ny fanavaozana nataon' i Zaratostra
1.3 Ny zôrôastrisma sy ny mazdeisma
2 Ny bokim-pinoan' ny zôrôastrisma
3 Ny finoan' ny Zôrôastriana
3.1 Ny Andriamanitry ny Zôrôastrisma
5 Ny fifandraisan' ny zôrôastrisma sy ireo fivavahana hafa
5.1 Fifangaroan' ny zôrôastrisma tamin' ny fivavahana pôliteista
5.2 Ny zôrôastrisma sy ny fivavahana silamo
5.3 Ny akon' ny zôrôastrisma tamin' ny fivavahana abrahamika
5.3.1 Ny zôrôastrisma sy ny jodaisma ary ny kristianisma
6 Ny zôrôastrisma amin' izao fotoana izao
6.1 Fizaràn' ny mpino zôrôastriana
6.2 Fielezan' ny zôrôastrisma
Ny fiforonan' ny zôrôastrisma[hanova | hanova ny fango]
I Zaratostra mpanorina ny zôrôastrisma[hanova | hanova ny fango]
I Zaratostra, sary nataon' i Raphaël tamin' ny taona 1509
I Zaratostra na Zôrôastra (630-550 tal. J.K.) no nanorina ny zôrôastrisma tany Persia (Iràna tranainy). Mbola tanora izy raha nahazo fanambaràna avy tamin’ i Ahura Mazda, andriamanitry ny mazdeisma izay fivavahana nipoiran’ ny zôrôastrisma. Notohanan’ i Vistaspa (taonjato faha-10 tal. J.K.), mpanjakan’ i Korasmia (any Torkestana ankehitriny) i Zaratostra. Noho izany, ny zôrôastrisma dia nihaniely. I Dariosy I (550-490 tal. J.K.) no mpanjaka nandray izany fivavahana izany voalohany. Nivavaka tamin’ i Ahura Mazda koa ny zanany atao hoe Kserksesy I (na Ahasoerosy I) (519-465 tal. J.K.) sy i Artakserksesy I (?-424 tal. J.K.).
Ny fanavaozana nataon' i Zaratostra[hanova | hanova ny fango]
Nanameloka ireo fombam-pivavahana misy filibana ara-nofo sy sorona ombilahy izay vonoina amin’ ny fomba mahatsiravina ho an’ ireo andriamanitry ny Persiana izy nefa nanohy ny fivavahana amin’ ny afo. Norarany ny sorona atao amin’ i Ahriman (na Angra Mainyu) sy amin’ ireo mpanompony, dia ireo andriamanitra ambany tao amin’ ny vondron’ andriamanitr’ i Persia izay maneho am-panoharana ny herin’ ny fanahy ratsy ao amin’ ny fanekem-pinoana vaovao nataon’ i Zaratostra. Aminy dia biby masina ny omby.
Nanao fanekem-pinoana mônôteista izay misy doalisma etika sy filôzôfika i Zaratostra. Ao amin’ ilay Andriamanitra tokana ny tsara sy ny ratsy fa tsy avy amin’ andriamanitra roa mifanohitra. Nefa izay dia naitatry ny sasany amin’ ireo izay nandray ny fampianarany taty aoriana ka mampifanohitra an’ i Ahriman sy i Ohrmazd.
Nolaviny ny fisian’ ireo andriamanitry ny finoan’ ny Persiana talohany. I Ahura Mazda irery ihany, hoy izy, no mendrika hivavahana. Nanambara koa izy fa ny iray amin’ ireo zanak’ i Ahura Mazda, dia i Ahriman izay nisafidy ny ratsy, no niteraka ny fifanoherana teo amin’ ny tsara sy ny ratsy.
Ny zôrôastrisma sy ny mazdeisma[hanova | hanova ny fango]
Ny mpanoratra sasany dia mampifangaro ny mazdeisma sy ny zôrôastrisma. Ny hafa indray manasaraka azy roa ireo. Raha ny marina dia fanavaozana ny mazdeisma nataon’ i Zaratostra ny zôrôastrisma. Tsy mônôteisma ny mazdeisma. Ao amin’ ny mazdeisma dia i Ahura Mazda no andriamanitra fara tampony ambonin’ ireo andriamanitra hafa manodidina azy, fa tsy andriamanitra tokana. Mizara roa ireo andriamanitra ireo dia ny ahura izay andriamanitry ny tsara sy ny daeva izay andriamanitry ny ratsy.
Ny bokim-pinoan' ny zôrôastrisma[hanova | hanova ny fango]
Ny Avesta (“Fiderana”) dia fitambaran-dahatsoratra masina ho an’ ny mazdeisma sy ny zôrôastrisma. Voasoratra amin’ ny fiteny iraniana tranainy io boky io. Tamin’ ny fotoana samy hafa teo amin’ ny tantaran’ ny mazdeisma sy ny zôrôastrisma no nanangonana azy ka maro ireo hevitra mety mifanipaka amin’ ny zôrôastrisma hita ao aminy.
ny Yasna (“Sorona”) izay mandidy ny mpino mba hadio; atao hoe gâthâ ireo andalan-kira noforonin’ i Zaratostra;
ny Visprad ("ny Fenitra rehetra") izay fitambaran-dalàna tokony hohajain’ ny Zôrôastriana amin’ ny fiantsoana an’ Andriamanitra;
ny Korda Avesta ("Fiderana fohy") izay misy vavaka fiderana sy fangatahana fitahiana tokony ho tanterahin’ ny olona tsirairay;
ny Siroza ("Telopolo andro") izay vavaka misy fiantsoana intelompolo an’ Andriamanitra mba hahazoana fiarovana amin’ ny fahavalo;
ny Yasht ("Hiram-pisoronana") izay iderana ireo andriamani-dehibe toa an’ i Ahura Mazda sy ireo Amesha Spenta sy i Anahita sy ny Masoandro ary ny Volana;
Ny Yasht dia nanome lanja indray ny fivavahana pôliteista, tsy araka ny fitoriana nataon’ i Zaratostra.
Ny finoan' ny Zôrôastriana[hanova | hanova ny fango]
Ny Andriamanitry ny Zôrôastrisma[hanova | hanova ny fango]
I Ahura Mazda dia tsy Andriamanitry ny zôrôastrisma irery fa an’ ny mazdeisma koa izay nipoiran’ ny zôrôastrisma. Ao amin’ ny zôrôastrisma anefa dia izy irery no atao hoe Andriamanitra fa tao amin’ ny mazdeisma kosa dia andriamanitra fara tampony ao amin’ ireo andriamanitra maro izy. I Ahura Mazda no nandamina ny fikorontanana tany amboalohany sady nahary ny lanitra sy ny tany.
Ny gatha na gâthâ dia lahatsoratra miendrika tononkalo ao amin’ ny fitambaran-tsoratra masina atao hoe Avesta. Ny fotokevitr’ ireo gatha ireo dia miorina amin’ ny fanompoam-pivavahana atao amin’ i Ahura Mazda ("Tompo Hendry" na "Tompon’ ny Fahalalana") sy amin’ ny finoana ny fifanoheran’ ny Fahamarinana sy ny Lainga izay manerana izao rehetra izao. Izany dia doalisma. I Angra Mainyu dia ratsy satria nisafidy ny hikambana amin’ ny Lainga, fa i Spenta Mainyu kosa dia nisafidy ny Fahamarinana.
Ny zavatra tsara rehetra dia avy amin’ ny fielezan’ i Ahura Mazda izay manome azy endrika sy fisiana: io no atao hoe Spenta Mainyu ("Fanahy Masina" izay hery mpamorona) sy ireo zavatra enina manampy azy, dia ny Fanahy Tsara sy ny Fahamarinana sy ny Fahefana sy ny Fanoloran-tena sy ny Fahasalamana ary ny Fiainana. Ny zavatra ratsy rehetra dia avy amin’ i Angra Mainyu ("Fanahy Ratsy") atao hoe Ahriman amin’ ny teny persana), sy avy amin’ ireo mpanampy azy.
Mino ny fiainana aorian' ny fahafatesana sy ny fitsarana ny fanahin’ ny maty ny Zôrôastriana. Ho tsaraina arakaraka ny zava-bitany fahavelony ny olona tsirairay. Mino ny fisian’ ny fanahin’ ny olombelona talohan’ ny nahaterahany sy aorian’ ny fahafatesany koa ny Zôrôastriana, ka izany no atao hoe fravahr. Raha mavesa-danja kokoa ny asa tsara noho ny asa ratsy dia hiampita tetezana hankany amin' ny paradisa mandrakizay ilay olona. Fa raha ny mifanohitra amin’ izany no izy dia ho any amin’ ny fiainana mijaly voafetra izy. Amin’ ny farany dia samy ho any am-paradisa avokoa ny olona rehetra. Mino ny fitsanganan-ko velona sy ny fiainana mandrakizay ny Zôrôastriana. Ka amin’ ny andro farany no hitrangan’ izany amin’ ny fotoana hanavaozana izao tontolo izao sy hamerenana indray ny fahamarinana.
Ny Afo-masin' ny Zôrôastrisma
Manaja ny singa efatra, dia ny tany sy ny afo sy ny rano ary ny rivotra, ny Zôrôastriana. Tandrovany ny fahadiovan’ ny rano sy ny tany sy ny rivotra ary ny afo. Zavaboarin’ Andriamanitra tsy misy fandraisan’ anjaran’ olombelona ny rivotra sy ny tany ary ny rano. Ny afo izay an’ Andriamanitra koa, nefa andraisan’ ny olombenona anjara ny famelomana sy fampaharetana azy, no mampifandray ny olombelona amin’ i Ahura Mazda.
Ny Zôrôastriana dia mivavaka indimy isan’ andro sy manao fety indray mandeha isam-bolana sy miomana dimy andro mialoha ny taom-baovao ary misakafo ambony tsihy miaraka amim-boninkazo.
Fanamasinam-panambadiana parsy tamin' ny 1905.
Ny Parsý (Zôrôastriana any India) vao teraka dia azo entina any amin’ ny tempoly mba hahazo tso-drano amin’ ny mpisorona izay manisy ny lavenon’ ny Afo masina eo an-kandriny. Feno ny maha olon-dehibe ny Parsý iray aorian’ ny faha-15 taonany rehefa vita ny fampianarana azy.
Amin' ny Parsý dia tsy maintsy atao ny fanamasinam-panambadiana. Heverin' ny Parsý ho ozona ny hamombana. Izy samy izy no mifanambady. Mahaloto ny mikasika ny tsy mpino ka tokony hatao ny fombafomba fanadiovana.
Fanomezan’ i Ahura Mazda ny aina. Ny fahafatesana kosa, indrindra fa ny fahalovan’ ny vatana, dia inoan' ny Zôrôastriana ho asan’ ilay demony Angra Mainyu. Noho izany dia tsy maintsy entina any amin’ ny Dakhma ("Tilikambom-pahanginana") ny faty mba ho hanin’ ny vorona fa tsy hikasina ny afo sy ny rano sy ny tany ary ny rivotra izay inoany ho masina. Araka ny finoana zôrôastriana dia mankany amin’ ny toeram-pitsarana ny fanahin' ny maty afaka telo andro aorian' izany. Entina ao amin’ ny toerana manokana natao hitehirizana azy ny taolan' ny maty. Ny fatin’ ny mpanjaka ihany no azo alevina manontolo am-pasana.
Amin' ny zôrôastrisma dia mitovy zo ny lahy sy ny vavy. Izany no nampisy mpanjakavavy, dia i Azarmedûkht (?-631 taor. J.K.) sy i Bûrândûkht (na Pûrândokht) (?-632 taor. J.K.), teo amin’ ny tantaran’ i Persia sy ny fanosorana vehivavy mpisorona tao Iràna (2010-2011).
Zava-dehibe amin' ny zôrôastrisma ny famokarana ary toheriny ny hakamoana sy ny fiankinan-doha amin’ ny hafa ary ny fangalarana ny fananan’ ny hafa. Ny olona rehetra dia samy tokony hiaina amin’ ny alalan’ ny fiezahana ataony sy ho afaka hiaina amin’ ny zavatra nisasarany. Tsy eken’ ny fampianaran’ i Zaratostra ny fanandevozana sy ny fanjakazakana amin’ ny olombelona. Tsy ekeny ny fangejana ataon’ ny olombelona samy olombelona ka ilaina ny manao tolona mba hahafoana izany. Tsy tokony hisy olona hanao ratsy ny biby ary ny sorona amonoana biby dia heloka satria manam-panahy sahala amin’ ny olona izy ireo.
Raràn’ ny fampianaran’ i Zaratostra ny fanompoan-tsampy sy ny fivavahana amin’ ny vato na amin’ ny toerana iray namboarina ho amin’ izany. Ny tranon’ Andriamanitra dia tsy izay nataon’ olombelona, fa ny fo sy ny fanahiny. Ny lainga no ratsy indrindra amin' ny fahotana rehetra.
Ny fifandraisan' ny zôrôastrisma sy ireo fivavahana hafa[hanova | hanova ny fango]
Fifangaroan' ny zôrôastrisma tamin' ny fivavahana pôliteista[hanova | hanova ny fango]
Taty aoriana dia nisy ny fanakambanana ny fampianaran’ i Zaratostra sy ny fivavahana pôliteista tany aloha, izay hita ao amin’ ireo fampianaram-pivavahana mifangaro atao hoe Yasht. I Artaksersesy II (435 na 445 - 358 tal. J.K.) dia nivavaka tamin’ i Ahura Mazda nefa nanompo koa an’ i Mitra sy i Anahita reniny (samy andriamanitra indô-iraniana tany aloha). Niroborobo ny fivavahana amin’ ireo andriamanitry ny firenana vahiny teo anilan’ ny zôrôastrisma tamin’ ny fitondran’ ny Seleokida grika (364 - 312 tal. J.K.) avy eo tamin’ ny fitondran' ireo Arsakida parta (250 tal. J.K. - 226 taor. J.K.). Ny dinastian’ ireo Sasanida (226-651 taor. J.K.) no nanandratra ny zôrôastrisma avo dia avo amin' ny maha mônôteisma azy ka nanao azy ho fivavaham-panjakana.
Ny zôrôastrisma sy ny fivavahana silamo[hanova | hanova ny fango]
Ny fanafihana nataon’ ny Arabo tamin’ ny niitaran’ ny fivavahana silamo tamin’ ny taonjato faha-7 dia naharesy ny Sasanida (224-651) izay nanandratra avo ny zôrôastrisma. Ny Miozolmana dia mihevitra ny Zôrôastriana ho isan’ ny ataony hoe "Olon' ny Boky" (arabo: Ahl al-kitâb) na "Fivavahan' ny Boky" sahala amin’ ny kristianisma sy ny jodaisma ary ny sabeisma (fivavahana jodeô-kristiana). Tamin’ ny taonjato faha-11, ny ankamaroan’ ny Persiana dia niova finoana ho Miozolmana.
Ny akon' ny zôrôastrisma tamin' ny fivavahana abrahamika[hanova | hanova ny fango]
Nisy vokany lehibe teo amin’ ny fivoaran’ ny finoana ny zôrôastrisma. Isan’ izany ny finoana ny fisian’ ny devoly (na demony) sy ny anjely ary ny amin’ ny eskatôlôjia (fiainana aorian' ny fahafatesana sy fiainana mandrakizay) ary ny doalisma teo amin’ ny fivavahana jiosy sy kristiana ary silamo.
Ny zôrôastrisma sy ny jodaisma ary ny kristianisma[hanova | hanova ny fango]
Maro ireo mpahay tantara mihevitra fa nisy akony lehibe teo amin' ny jodaisma ny zôrôastrisma tamin' ny taonjato faha-6 tal. J.K. rehefa nahazo an' i Babilôna izay nanaovana sesitany ny mponin' i Jodà ny Persiana. Nisy fiantraikany teo amin' ny foto-pampianarana jodeô-kristiana ny rafitra nisy ao aminy araka ny voasoratra ao amin' ny Bokin' ny fitsipi-pifehezana hita tao amin' ireo soratanam-piraketan' ny Ranomasina Maty. Hita ao ireo lohahevitry ny zôrôastrisma izay mitovitovy amin' ny an' ny jodaisma sy ny kristianisma ary ny finoana silamo.
Ny ankamaroan' ny lahatsoratry ny jodaisma - momba ny lohahevitra toy ny fiainana aorian' ny fahafatesana, ny fiandrasana mesia, ny fitsarana aorian' ny fahafatesana, ny lanitra sy ny helo, ny safidy malalaka ananan' ny olombelona - dia niseho tamin' ny vanimpotoana nanjakan' ny Persiana tao Jodea, ka azo eritreretina ny fisian' ny akon' ny zôrôastrisma amin' ny fivavahana jiosy, izany hoe lohahevitra momba ny eskatôlôjia. Isan' ny lohahevitra mety azon' ny jodaisma tamin' ny zôrôastrisma koa ny demônôlôjia. Izany dia tsy hita raha tsy ao amin' ny soratra jiosy taorian' ny fahababoana tany Babilôna (taona 597 - 538 tal. J.K.), izay nifampikasohan' ny manampahaizana jiosy tamin' ny Persiana sy ny fivavahana iraniana sy korda.
Ny zôrôastrisma amin' izao fotoana izao[hanova | hanova ny fango]
Fizaràn' ny mpino zôrôastriana[hanova | hanova ny fango]
Mizara roa lehibe ireo mpino zôrôastriana, dia ny Parsỳ sy ny Iranỳ.
Ny Parsý dia ireo Zôrôastriana nandao an’ i Iràna ka nonina tany India indrindraindrindra tamin’ ny nidiran’ ireo Miozolmana tao Persia (637-751). Tsy mandray olona hiova finoana hanaraka azy izy ireo ary tsy manambady afa-tsy izy samy izy. Miisa eo amin’ ny 180 000 eo ny Parsý amin’ izao. Ao Gujarat sy Bombay no tena ahitana azy ireo. Tsy mandevina na mandoro faty ny Parsý. Ny Iraný na Zartohstý dia ireo Zôrôastriana ao Iràna na ireo manaraka ny fampianaran’ ny Zôrôastriana avy ao Iràna na ireo niala an’ i Iràna tamin’ ny taonjato faha-19 sy faha-20 ka nankany Azia Atsimo. Manaiky ny fiovana avy amin’ ny finoana hafa ho amin’ ny finoana zôrôastriana ny Iraný, tsy tahaka ny Parsý.
Fielezan' ny zôrôastrisma[hanova | hanova ny fango]
Tempolin' ny Afo ao Yazd
Ao Iràna no tanàna ahitana Zôrôastriana maro indrindra izay miisa 35 000 eo ho eo (ao amin’ ny tananan’ i Teheràna sy i Kermana ary i Yazda). Ahitana azy ireo ihany koa ny any Etazonia sy Britaina Lehibe. Ahitana Zôrôastriana vitsivitsy ny ao amin’ ireo firenena akainy an’ i Iràna sahala amin’ i Torkia sy i Armenia sy i India sy i Torkmenistàna sy i Ozbekistàna sy i Afganistàna sy i Pakistàna sy i Azerbaijàna sy i Kordistàna ary i Koety. Misy koa ireo mandray ny finoana zôrôastriana ao Brezila sy ao Skandinavia (i Danemarka sy i Nôrvezy ary i Soeda) sy ao Rosia sy ao Aostralia ary ao Kanada. Miisa 250 000 eo izy eran-tany.
Fivavahana iraniana - Zôrôastrisma - Zervanisma - Mandeisma - Mitraisma - Manikeisma - Mazdakisma - Iazdanisma - Iarsanisma - Babisma - Bahaisma
Lohahevitra momba ny zôrôastrisma:
Zaratostra - Mônôteisma - Doalisma - Devoly - Anjely - Arikanjely
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Zôrôastrisma&oldid=1036463"
Voaova farany tamin'ny 22 Aogositra 2021 amin'ny 12:47 ity pejy ity.